Momba anay - Wilongda Technology Co., Ltd.
Wilongda Technology Co., Ltd. dia mpanamboatra singa fanoloana fiara isan-tsokosoko, banga fanalahidy auto, fanalahidy transponder, fanaraha-maso lavitra. Izay mandrakotra marika marika lehibe mihoatra ny 60 misy Audi, BMW, Mercedes, Volks Wagen, Renault, Peugeot , Citroen, Fiat, Ford .... ny vokatra amidy eran'izao tontolo izao, any Etazonia, Eropa, Amerika atsimo sns, tongasoa ireo mpiara-miasa OEM sy ODM hiaraka aminay.
● Antoka ny kalitao.
● Ampifanaraho amin'ny fandaharam-potoananao.
● Miasa amin'ny teti-bolanao.
"Ny fiainana no kalitao, ny fanompoana no fanahintsika!" dia ny finoana ny serivisintsika. Miorina amin'ny teknolojia mandroso, ny fiaraha-miasa ary ny matihanina dia mifehy ihany koa ny vidiny amin'ny alàlan'ny fitantanana mandroso izahay, mba hahafahanay manome vokatra avo lenta ary koa ny vidiny mirary. Izahay dia mikendry ny hanolotra ny serivisy azo antoka sy matihanina indrindra ho an'ireo mpanjifantsika mendri-kaja manerantany.
Wilongda Technology Co., Ltd dia manenjika ny politikan'ny orinasa "Ny kalitao dia ambonin'ny zava-drehetra, ny serivisy dia manome ny ho avy", ary manaraka ny kalitao voalohany sy ny fampandrosoana teknolojia. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana hatrany ny fitantanana orinasa sy ny ezaka tsy misy tohiny amin'ny fikatsahana ny hanana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra, dia manome am-pahatsorana ny mpanjifanay amin'ny vokatra sy serivisy izahay. Hanohy hamolavola sy hamokatra vokatra bebe kokoa sy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa manome lanja ny kalitao sy ny marika.
Miaraka amin'ny fampivoarana haingana ny indostrian'ny familiana fiara, hanaraka akaiky ny fivoaran'ny haitao fampiroboroboana an'izao tontolo izao isika, ho tonga zava-misy sy hivoatra ary hanatsara hatrany!
Ny mpanjifa dia tongasoa hanontany sy hanafatra ny vokatray.
Omeo vokatra avo lenta ary mampiofana mpiasa avo lenta.
Tariho ny fampandrosoana ny indostrian'ny LCD ary ho mpanamboatra lakilen'ny fiara voalohany ianao! )
--- Miompana amin'ny olona, ​​mitady ny marina amin'ny zava-misy, manohana ny fanavaozana ary mihoatra lavitra)
(Filozofia momba ny asa: --- Kalitao avo, fanavaozana, tsy fivadihana, henjana
Kalitao avo lenta: manome vokatra tsara sy serivisy teknika
Fanavaozana: Fampiharana teknolojia vaovao sy famoronana tsy tapaka ny vokatra sy ny haitao vaovao
Fahamendrehana: ny orinasa no fototry ny fampandrosoana ny orinasa. Raha tsy misy ny tsy fivadihana dia tsy misy
Hentitra: Mitaky mafy ny tenantsika, mitantana tsara ny fifandraisan'ny mpanjifa, ary manome vokatra ho an'ny mpanjifa vokatra tsara sy serivisy teknika